Usoo guurista Espoo - InfoFinland
Magaalooyin > Espoo > Usoo guurista Espoo
Marka aad Espoo u soo guurto, waxaad arrimaha ruqsadaha la xiriira ka qabsan kartaa shabakadda Enter Finland ee Hoggaanka socdaalka ama goobta adeegga ee hoggaanka. Isu diiwaangelinta degane ahaan waxay ka dhacdaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Isku-diiwaangelinta sidii qof deganne ah
Haddii aad si joogto ah ugu soo guurto Espoo si aad u deganaato waa inaad degmada isaga diwaangelisaa sidii qof degane ah. Waxaad iska diiwanagelin kartaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Marka aad aadeyso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, horay u sii qaado
warqad aqoonsi (tusaale ahaan baasaboor)
Ogsoonoow, in warqadaha dibadda laga keenay ay ahaadaan kuwa la sharciyeeyay. iyo kuwo ku turjuman afka finnishka,-iswidhiska ama -ingiriiska.
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka waad ka dalban kartaa summada qofka (henkilötunnus).
Warar kale ka sii aqri: Isu-diiwaangelinta sidii qof degane ah, Degmada Finland ku taal.
Adeegga waxaa qeyb ka ah Helsinki-info, Magaalada Espoo, Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, Hoggaanka socdaalka, Maamulka canshuuraha, Kelada, Xafiiska shaqada ee Uusimaa, Xarunta ammaanka hawlgabka, Rugta Ganacisga soonaha Helsinki iyo Ururka Midowga Iskaashatooyinka xirfadleyda Finland SAK.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 13.01.2022 Boggan war-celin ka soo dir